Kedu ka m ga-esi gbanwee asụsụ AutoCorrect na Okwu? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Okwu autocorrect asụsụ - azịza ya
Okwu autocorrect asụsụ - azịza ya
Kedu ka m ga-esi gbanwee asụsụ AutoCorrect na Okwu?
Settọ nyochaasụsụmaka ụdị Office nke ịntanetị, jiri usoro ndị a:
Mepee MicrosoftOkwungwa na ihe nchọgharị weebụ gị.
Pịa Nyochaa taabụ.
Pịa bọtịnụ Spelling & Grammar (akụ) wee họrọ Set ProofingAsụsụnhọrọ.
Họrọ nke ọhụrụasụsụna ịchọrọ iji maka nyocha.
Pịa bọtịnụ OK.
ọ hụla ya n'ime, ọ bụrụ na ị gaa n'ihu na mgbe ụfọdụ pịnye ihe na-ezighi ezi, okwu ahụ ga-aga n'ihu ma mezie ya na akpaghị aka, nke a bụ n'ihi ihe a na-akpọ autocorrect.
Okwu na-ewekarị okwu ndị a na-amaghị nke ọma na ndudue sistemụ kachasịsịsị na ha na mgbe ọ na - achọpụta na a ga - emezi ya, anyị ga - aga n'ihu ugbu a wee mepụta ntinye aka anyị ga - aba uru. Anyị na-eme nke a site na ịga na bọtịnụ ọfịs anyị, ịpị ya ma gaa na nhọrọ okwu ebe a, ebe anyị ga-aga ebe a anyị pịa mpaghara mgbazigharị ma na elu nke oke anyị na-ahụ autocorrect nhọrọ ka anyị pịa ebe a ugbu a, anyị na-ahụ otu ebe na ekpe ndepụta anyị na-edochi ya na aka nri ya na mgbe ị pịnyere ihe ndị a, nke a ga-anọchi ya ma ọ bụrụ na m gbadaa ntakịrị, anyị na-ahụ ihe m dere ebe ahụ ọtụtụ ụyọkọ okwu ebe a na-aga n'ihu okwu ahụ ma mezie ya na akpaghị aka . Agbanyeghị, ka anyị gaa n'ihu mepụta nke anyị nwere ike bụrụ ahịrịokwu ma ọ bụ sụgharịa pụrụ iche nke ikekwe aha nna ka ihe m ga-eme bụ ịde n'aha m yana agbanyeghị na ọ naghị esiri m ike ịde ụdị a ma ọ bụ ogologo oge m ga-achọ ịtọ ọ dị ka ọ bụrụ na mgbe m pịnyere aha m, ọ na-aga n'ihu wee jiri aha m zuru ezu dochie ya, enwere m nke ahụ ebe ahụ, m ga-pịa tinye tinye ma họrọkwa ok ọzọ mma ma ugbu a, mgbe m pịnyere BK ozugbo m kụrụ bọtịnụ m, mezue ya ma gbanwee ya n'aha m, ka anyị gaa n'ihu ma mee nke ọzọ ka anyị mee ka ọ dị ntakịrị ka anyị tinye adreesị email m, nke a abụghị ezigbo adreesị ozi-e m ugbu a, mana ụfọdụ n'ime gị nwere ike ịnwe adreesị email ogologo oge ebe m jiri ịrụ ọrụ oh ọ dị ihe dịka mkpụrụedemede 26 ọ bụ onye nzuzu na kama ịpị ihe niile oge ọ bụla ị gbanyere adreesị email gị uch, ị nwere ike ime ụdị ihe ahụ, yabụ m ga-etinye ya, eeehm, yabụ mgbe m pịnyere, m ga-eme ya nye m adreesị email m, ka anyị tinye nke ahụ, ọ dị mma ma dịkwa mma, lee ya anya, m dị mfe m ga-aga ebe a gn ikike m ma nye ya adreesị email m ma ọ bụrụ na m chọrọ iwepụ ya achọghị m nke ahụ ọzọ ma eleghị anya, enwere m ọrụ ọzọ ebe ọ bụla na onye na-eji kọmputa mgbe m chọrọ tufuo ya, anyị ga-aga na na laghachi azụ anyị okwu nhọrọ mgbazi autocorrect na m nnọọ nwere pịnye na dochie na-ahụ na ọ na-ahọrọ ebe a na ihichapụ ka m tufuo nke a kwa oh m kụrụ tinye, adịghị dochie, ka ihichapụ, dịkwa mma, na ugbu a ọ bụrụ na m nwere ike Fanye BK, ọ dị mma ol 'BK na nke ahụ bụ ihe dị mfe iji mee nnabata autocorrect ekele maka nnukwu nkuzi ụlọ ọrụ Microsoft ka ịdebanye aha na channelsi trainsi gnals train signaloffice ma ọ bụ gaa WWN mgbaàmà akara maka ozi ndị ọzọ na Microsoft anyị zuru oke. Ọbá akwụkwọ ọzụzụ Office
Kedu ihe kpatara AutoCorrect m na okwu asụsụ ọzọ?
The AutoCorrecttaabụna AutoCorrectigbe ngosipụtaasụsụdị ka akọwapụtara naihentinye ntinye. Họrọihedum akwụkwọ wee pịa Nyochaa taabụ |Asụsụ| Nwee UghaAsụsụ. NaAsụsụigbe, doro anyaihe 'Chọpụtaasụsụna-akpaghị aka 'nhọrọ.
Ọ bụ Cindy. Anyị rutere modul 3 na nke a bụ modulu ebe anyị ga-ekwu maka ịhazi usoro. Ihu ọma, nke a pụtara na ọ bụrụ na ị nwere leta ma ọ bụ ọnụọgụ ịchọrọ ịgbanwe ụdị nke mbụ.
Dịka ọmụmaatụ, ederede na-abụkarị oji ma nwee nha na ederede. Wantchọrọ ịgbanwe nke a, a na-akpọ nke a nhazi. Ga-ahụ na Modul 4 anyị na-ekwu maka ịhazi usoro nke paragraf ga-ewe.
Ma ugbu a, anyị ga-ekwu maka ịkpụzi agwa. Nke a bụ Nkebi nke 1 ugbu a, ọ ga-amasị m ịmalite usoro a site na ịgwa gị ntakịrị ihe gbasara njirimara akpaaka na ụfọdụ nhọrọ dị na ya. Ya mere, ka m gaa n’ihu tụgharịa na akwụkwọ oghere m ga-egosi gị ihe m na-ekwu.
Enwere ụfọdụ ihe nke so na ihe akpọrọ AutoCorrect, ka m gosi gị ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ. Otu ihe ndị a na-ahụkarị bụ na ọ bụrụ na ị ghọtahie mkpụrụokwu ụfọdụ, a ga-asụpe ya nke ọma. Okwu a bu ihe omuma atu.
Ọ bụrụ na m asụpe ya TH ma lelee ya ka ọ kụrụ oghere oghere, ọ ga-adị m mma. Nwere ike ọzọ. AB-N.
Ọ bụrụ na m dee ya otu a, a ga-asụpe ya nke ọma. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụrụ na m gosi gị atụmatụ AutoCorrect na nkeji ole na ole, ị ga-ahụ na ọ bụrụ na ọ bụ okwu a na-edekarị edehie, ma ọ bụrụ na ọ dị na ndepụta ahụ, enwere ndepụta nke okwu ndị a ebe a ọ ga-agbanwe ya maka gị. Iberibe ihe.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m pịnye ½, ị ga - ahụ etu oghere dị ka looks ma ọ bụ ¼. Fractions bu ihe ozo nke AutoCorrect. Kedu maka ọnụọgụ iwu? You ma ihe bụ ọnụ ọgụgụ iwu? Nọmba ọnụ bụ okwu 1., ya mere.
Ọ bụrụ na itinye oghere, a ga-edebanye aha S-T, otu ha si akpọ ya. Nke abụọ, nke a bụ ihe atụ ọzọ dị mma. Hyperlinks kwa.
Ya mere ọ bụrụ na ị banyere adreesị ozi-e ma ọ bụ weebụsaịtị, ọ ga-aghọ hyperlink na-akpaghị aka ozugbo ị banyere adreesị ozi-e ma ọ bụ weebụsaịtị wee see ogwe ohere. Nke ahụ pụtara na m nwere ike were oke m wee hụ ma ọ bụrụ na m tụọ mkpụrụ okwu ọ bụ Ctrl-pịa iji soro njikọ ahụ. Nke ahụ kwuru, mgbe m jidere igodo Ctrl wee pịa, ana m aga weebụsaịtị ahụ ebe ọ bụ njikọta.
Ya mere aga m aga n'ihu ma hichapụ ụfọdụ n'ime ihe a. BTW, Njikwa na leta A ga-ahọrọ ihe niile ma mesịa m kụrụ Hichapụ na keyboard. Anyị ga-eleba anya na ederede ederede na ngalaba na-esote.
Yabụ ugbu a ị maara na njikwa-A na-ahọrọ ihe niile. Lee ụfọdụ ihe ndị ọzọ bụ akụkụ nke AutoCorrect. Ọ bụrụ na m pịnye dashes atọ site na mykeyboard dị ka nke a wee kụrụ banye, ana m enweta usoro kwụ ọtọ.
Yabụ ọ bụrụ na achọrọ m ọtụtụ n'ime ndị a, enwere m ike ime nke ahụ ọtụtụ oge na enwere m ọtụtụ ahịrị. Ihe kachasị mma banyere ya bụ na ị nwere ike pịa ahịrị ndị a. You hụrụ nke ahụ? Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ị dee ọrịa strok dị ka ọtụtụ ndị na-eme, ụtarị ahụ na-agbanwe naanị na ọ bụ nnukwu ọgba aghara.
Ya mere aga m aga n'ihu ma họrọ ma hichapụ ihe niile. Ma otu a ka ị siri abanye n'ahịrị. Ha ga-eme hoo haa.
Jide Mgbanwe, pịa akara ngosi atọ, hapụ Mgbanwe, wee banye. Ma ugbu a, ị nwere akara akara. Ugbu a, enwere ahịrị ndị ọzọ ole na ole iji tinye ebe a.
Ọ bụrụ n’ịle nọmba dị n’elu keyboard gị, akara ngosi niile agaghị arụ ọrụ, mana ọtụtụ n’ime ha ga - arụ ọrụ. Ya mere, mgbe m jidere igodo Mgbanwe ma pịa akara ngosi akara nke dị n'elu nọmba atọ ma m kụrụ igodo Tinye, enwere m akara a ma ọ bụ ókèala ka a na-akpọ ya. Ọzọ bụ kpakpando.
akara maka subsection
Ọ bụrụ na m jidere Mgbanwe na 8 nwere kpakpando n'elu ya, mgbe m hụrụ atọ n'ime ha, m ga-enweta nke a pụrụ iche. Yabụ na nke ahụ dị mma karịa ka nke ahụ si arụ ọrụ. Ha nwere ike inwe ụfọdụ ezigbo ọmarịcha mmetụta na dọkụmentị gị.
Ugbu a, ka m gaa n’ihu ma hichapụ ya niile. Achọrọ m iwebata gị ma gosi gị ebe atụmatụ AutoCorrect dị na otu ị ga - esi jiri ụfọdụ n'ime ha. Pịa Njikwa taabụ ma gaa na Nhọrọ.
N'okpuru idozi aka ekpe, ị ga-ahụ nhọrọ AutoCorrect ebe a. Ugbu a, mgbe m pịa ya ị ga-ahụ na e nwere ihe ole na ole na-akpaghị aka na-enyocha ebe a. Nke ahụ pụtara na Okwu ga-emere gị ihe ndị a na akpaghị aka.
Dịka ọmụmaatụ, amaara m maka ide mkpụrụedemede abụọ na mbido okwu. Microsoft Word ga-eme ka mkpụrụedemede nke abụọ nwee isi, ọ ga-ewetara gị leta nke mbụ nke ahịrịokwu. Anyị kwurịtara banyere ya na Module 1.
Ha abụọ ga - ewepu ma ọ bụ ya. Ya mere, ihe ị ga-ahụ n'okpuru Mwepu bụ na nke a bụ ndepụta okwu niile ị nwere ike ịbanye na oge na oghere, ma edeghị okwu na-esote. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye otu, tinye ya ebe a wee pịa okwu Add.
Ọzọkwa taabụ nke na-ekwu Ogwe Mbụ. Odi mgbe ufodu okwu ichoro ideputa nke nwere mkpuru edemede abuo na nbido, dika NJ bu ezigbo imaatu. Ma mgbe ịchọta nke ịchọrọ ịgbakwunye, tinye ya ebe a wee pịa tinye, ọ dị mma.
Ga-ahụkwa na mgbe anyị malitere ịrụ ọrụ na tebụl na usoro ọzọ, mkpụrụ edemede mbụ nke ihe niile dị na cell table ga-abụ isi. A na-ejide ụbọchị izu n'izu na-akpaghị aka ma na-eburu n'uche ojiji nke igodo mkpọchi Caps. Ọ bụrụ na ịgbanyegogoro Caps Lock anya, ọ ga - atụgharịrị gị ya.
N'okpuru ya ọ dị ka ndepụta akara. O nwere ike ịbụ na ị hụla ka ndị mmadụ na-ede ihe ọchị na ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ ugbu a. Banye ya, a ga-egosipụta ya n'aka nri.
Ma ọ bụrụ na ị na-agbadata na ndepụta ahụ, ị ​​ga-ahụ na ọ bụ ndepụta nke mkpụrụedemede edeghi ede. Mperi ndetu ya n'aka ekpe, sụpeezi ziri ezi na aka nri. Ya mere, mgbe ị pịnyere mkpụrụ okwu n'ụzọ dị otú a, ọ ga-apụta dịka ị si hụ ya n'aka nri.
Ndị a bụ ụzọ ole na ole ị ga - esi jiri uru a. Nwere ike ịnwe ụfọdụ mkpụrụ okwu ị ga-asụpe oge niile na ịpepe ya otu ụzọ oge ọ bụla. Tinye mperi gị n ’aka ekpe na npepe ziri ezi gị n’aka nri.
I nwekwara ike ime ụdị ihe ahụ. Ọ bụrụ n ’ị ga - ede aha gị n’ọgwụgwụ leta, tinye aha izizi gị. Ka anyị kwuo na aha mbido gị bụ SS.
Tinye aha gi n'uju ebe a dika o kwesiri igosi. Wee pịa Tinye. Enwela obi ụtọ na aha aha ndị a.
Chọghị oge, mkpụrụedemede ukwu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ya mere, m ga-aga pịa OK n'ụzọ niile ma gosi gị na mgbe m pịnyere S-Hand ọ na-ete aha ya niile. Yabụ nke a bụ nnukwu ụzọ iji atụmatụ AutoCorrect.
M na-alaghachi faịlụ wee pịa nhọrọ ọzọ. Mgbe m gara Ndozi ma laghachi na AutoCorrect, rịba ama na ọ bụrụ na m chọrọ iwepu aha m, m ga-apịnye ha n'aka ekpe ma ha ga-apụta na ndepụta ahụ ebe a, naanị m nwere ike kụrụ ụzọ ahụ. Yabụ nke a bụ ụzọ dị mma iji jiri atụmatụ AutoCorrect a.
Ugbu a, achọrọ m igosi gị ihe ndị ọzọ dị ngwa. Mara nke a AutoFormat ka ị pịnyere. Agwara m gị ihe ole na ole mgbe anyị pịnyere akwụkwọ a na-enweghị ihe ọ bụla.
M kwuru nkwụsịtụ. Anyị amaala ½, ¼. Akpọghị m aha n’elu a.
Ihe akara akara aka pụtara bụ, mgbe ị pịnyere akara akara, ha nwere akara kwụ ọtọ ma ọ bụghị nkwuputa ọgụgụ isi nwere obere ederede na njedebe. Obi ike na ịntanetị na ezigbo nhazi. Onye ahụ adịghị adị ebe a, ị gaghị enwe ike iji ya mee ihe, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ka okwu pụta na akpaghị aka na nkwuwa okwu, naanị tinye na akara mmuke, okwu ọ bụla, na akara mmuke na okwu ahụ ga-enwe nkwuwa okwu.
Nke a bụ gị internet na netwọk ngafe na hyperlinks. Nke ahụ bụ mgbe m gosiri gị otu esi abanye weebụsaịtị ma ọ na-aghọ hyperlink na-akpaghị aka. Lee iwu gị ndị anyị kwuru maka ha.
Egosikwara m gị ọrịa strok ndị a nke ga-enye gị usoro kwụ ọtọ. Nke a bụ nke a. Ọ bụrụ n’ịnwale ụfọdụ ihe m kwuru na ha anaghị arụ ọrụ ọ bụla, lelee ma ha agbanyela ebe a.
Ihe ndị ahụ bụ nnukwu ihe m chọrọ ịgwa gị ngwa ngwa gbasara AutoCorrect. Aga m aga n'ihu wee pịa OK ebe ahụ. Ihe niile m ma bụ na ị nwere ntụpọ dịka nhọrọ.
Will ga-ahụ ka ọtụtụ n’ime ha na-eme na akpaghị aka. Mgbe ahụ achọrọ m ịkpọrọ gị ugbu a na ngalaba 2 wee bido ikwu okwu banyere nhọrọ ederede.
Kedụ ka m ga-esi kwụsị Okwu ịgbanwe mkpụrụ okwu sụpe okwu?
Họrọihe“Nyochaa” taabụ, wee pịa “Asụsụ-> Mee nyochaAsụsụ. ” Ebekabanye naiheigbe dị n’akụkụ “Emelanlelemakamkpoputama ọ bụ ụtọ asụsụ, ”wee pịa“ OK. ”Gịhọrọ ngalaba ga-eme nrụpụta iji leghaara ihe niile anyamkpoputa, ụtọ asụsụ, naasụsụụdị.Ọkt 24 2020
Ọ bụrụ na i bipụta akwụkwọ gị ma gwa enyi gị ka ọ gụgharịa ya, ọ ga-abụ na ha ga-edehie ihe ndị ahụ e dere na mkpịsị ode uhie wee dee aro ọ bụla n'akụkụ ya.
Ọ́ gaghị adị mfe ma ọ bụrụ na ị ga - eme nke ahụ? elektrọnik? Na Okwu ị nwere ike - jiri atụmatụ abụọ a na-akpọ Mgbanwe Ntugharị na Nkwupụta. Aga m agbanye nsuso mgbanwe ugbu a ka m nwee ike igosi gị ihe m bu n'uche. Iji mee nke a, gaa nyocha taabụ ...
wee pịa Mgbe ahụ jiri iwu Mgbanwe Sochie. Ugbu a mgbanwe ọ bụla m mere na akwụkwọ ahụ ga-egosi dịka 'akara', nke bụ azịza Okwu nye mkpịsị uhie uhie. Iji maa atụ, ọ bụrụ na m hichapụ ederede, ọ gaghị apụ ...
nanị ihe ọ na-apụta. Ọ bụrụ na m tinyekwuo ederede, ọ na-egosipụta. Nke a na-enye onye nwe akwụkwọ ahụ ohere ịhụ mgbanwe ndị m mere tupu m tinye ya na akwụkwọ ikpeazụ.
I nwekwara ike ịgbakwunye ihe na mpaghara dị n'akụkụ site na ịhọrọ ederede ịchọrọ ịza ajụjụ ...
wee pịa iwu Ọhụụ Ọhụrụ. N'ihe atụ a, ọ kachasị mma ịdegara leta ahụ n'aka ndị ikike na-ewe n'ọrụ bụ nke m ga-atụ aro. Mgbe ịmechara, pịa igodo Esc ma ọ bụ pịa ebe ọ bụla n'èzí igbe igbe iji mechie ya.
Kedu ka o si arụ ọrụ mgbe ị nọ na nsọtụ ọzọ nke dọkụmentị? onye edemede mbụ, ọ dị gị n'aka ịnakwere mgbanwe ndị ahụ iji mee ka ọ dịrị adịgide ma ọ bụ jụ ya ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị. Mee mgbanwe ahụ ebe a. Naanị họrọ ha na cursor ...
wee gaa Nabata iji debe ma ọ bụ Jụ ịlaghachi na ederede mbụ gị, ị nwere ike mepee menus n'okpuru iwu wee hụ mgbanwe niile dị na akwụkwọ ahụ na-anabata ma ọ bụ jụ. Naanị m ga-anabata mgbanwe a. Iji wepu echiche, buru ụzọ họrọ ubi ikwu ...
wee gaa iwu Hichapụ. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ okwu, ị nwere ike ihichapụ naanị nke ugbu a ...
ma ọ bụ otu oge Clear. N'oge a ọ nwere ike inye aka igosi ụfọdụ akara aka n'akụkụ kama ederede ederede n'onwe ya. Nke a kwesịrị ime ka dọkụmentị dị mfe ọgụgụ.
Nke mbu, gaa iwu Show Markup ...
mgbe ahụ Balloons. Ugbu a pịa Ngosipụta Ntugharị na Balloons ...
na otutu nke Mgbanwe a kpaliri aka nri. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị zoo oge niile nwale, lelee nhọrọ dị na menu ebe a. Ugbu a, anyị na-ahụ ụdị ikpeazụ nke akwụkwọ ahụ, mana mgbanwe na nyocha niile ka na-ahụ.
Họrọ Enweghị Akara ...
na akara aka ga-apụ n'anya ka anyị wee hụ ihe edemede ikpeazụ nwere ike ịdị ka mgbanwe niile. Agbanyeghị, enwere otu ihe ị ga-ebu n'uche (nke a dịkwa ezigbo mkpa): Izochi akara ahụ abụghị otu ịnabata mgbanwe niile. Kwesịrị ịnakwere ma ọ bụ jụ mgbanwe dị na akwụkwọ gị tupu ịnye ụdị nke ikpeazụ.
Ka anyị kwuo na mmadụ nyochara ma dezie akwụkwọ gị mana echefuru ịgbanye Mgbanwe Track. Ọ ka nwere ike ịnakwere ma ọ bụ jụ mgbanwe ndị e mere site na iji atụmatụ dị mma akpọrọ Compare. Iji malite, na Review taabụ, pịa Tulee ...
wee pịa Tụlee ọzọ. Ga-achọ otu akwụkwọ mbụ gị ...
tinyekwara otu mbipute nke edegharịrị edegharị. Mgbe ịmechara, pịa OK. N’ebe a, Okwu jiri akwụkwọ abụọ a wee depụta mgbanwe ndị emere n’etiti ha.
Nke a bụ akwụkwọ izizi m ...
nsụgharị nke onye ọzọ degharịrị ...
na n’etiti bụ ụdị jikọtara ọnụ na njuputa zuru oke, dịka a ga - asị na atụmatụ Cha Cha Cha Cha dị na oge niile. Okwu nwere ike itinye nke a na-adabere n'ịtụle akwụkwọ abụọ ahụ. Ugbu a ị nwere ike ịnabata ma ọ bụ jụ mgbanwe ndị ahụ dịka m gosiri gị na mbụ.
Atụmatụ ndị a niile nwere ike ịbụ ezigbo enyemaka mgbe ị na-emekọ ọrụ. Ha na-eme ka ọ dị mfe ịgbaso nyocha na ịkọwa echiche na azụ - ka ị nwee ike rụọ ọrụ n'otu akwụkwọ ahụ na ndị enyi, ezinụlọ ma ọ bụ ndị ọrụ ibe.
Kedu ka m ga - esi mee AutoCorrect Okwu na bekee?
TụgharịaNchekwa onwema ọ bụ banye naOkwu
Gaa na Njikwa> Nhọrọ> Nyocha ma họrọNchekwa onweNhọrọ.
NaNchekwa onwetaabụ, họrọ ma ọ bụ hichapụ Dochie ederede ka ị pịnyere.
Kedu otu esi enyocha asụsụ na Microsoft Word autocorrect?
Ọ bụrụ n’inweghị asụsụ nnwale egosipụtara na ogwe ọkwa, pịa aka n ’ọnọdụ ọkwa wee pịa‘ Asụsụ ’itinye akara akara n’akụkụ ya. Kedu asụsụ ọ na egosiputa mgbe ị na-achọ imepe okwu Nhọrọ AutoCorrect? Asụsụ nke dialog ọ kwekọrọ na nke egosiri na ogwe ọkwa? Nzaghachi a ọ nyere aka?
Ebee ka m ga-ahụ autocorrect na Windows 10?
Pịa faịlụ taabụ dị n'elu aka ekpe nke mpio ahụ. Pịa na Nhọrọ na ala nke aka ekpe. Pịa na ofchọpụta mgbe ahụ na Nhọrọ AutoCorrect iji mepee igbe okwu. Pịa na taabụ AutoCorrect. Site na igbe okwu a, ị nwere ike idezi nhọrọ ndị a site na ịka igbe.
Kedụ ka m ga - esi degharia mkpụrụ edemede n’onwe m n’okwu?
I nwekwara ike dezie AutoCorrect ndepụta site na itinye gị chọrọ degharịa na Dochie na Na ederede ubi n'okpuru ndepụta gosiri n'elu. Dochie na-egosi ederede ka a dochie ya yana iji gosipụta ederede na a ga-eji ya dochie ya. Mgbe ịmechara, pịa pịa ka ị gbakwunye ya na listi.
Kedu ka ị si agbanwe asụsụ nyocha na okwu?
Mgbe asụsụ gbanwere, ị ga-ahọrọ ọdịnaya niile (Ctrl + A) wee gaa igbe okwu na Asụsụ ma tinyegharịa Bekee. Pịa Nyochaa | Asụsụ | Tọọ Asụsụ Asụsụ.